Ny AIO vaovao an'ny Microsoft dia antsoina hoe Surface Studio ary mahavariana | Vaovao momba ny gadget
Ny AIO vaovao an'ny Microsoft dia antsoina hoe Surface Studio ary mahavariana
Nandritra ny volana maromaro dia niresaka momba ny mety hanombohana ny AIO (All-in-one) avy amin'i Microsoft izahay. Taorian'ny tsaho sy resaka an-tsokosoko nandritra ny volana maro dia nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny Surface Studio i Microsoft AIO mahavariana misy efijery mikasika izay ahafahantsika manova ny fironan'ny efijery araky ny filantsika. Ny efijery Surface Studio dia 28 santimetatra ary mampiasa teknolojia Pixel Sense miaraka amina vahaolana mihoatra ny 4k, 3840 x 2160 (13,5 tapitrisa teboka) ary mikasika izay ahafahantsika mampiasa ny Surface Pen mirona eo amin'ny efijery. Fa hafa hanamorana ny fampiasana, ity AIO ity dia miaraka amin'ny SurfaceDial, varingarina kely ahafahantsika mifampiresaka hita eo amin'ny efijery na amin'ny alàlan'ny menus avy any ivelany toa ny touchpad.
Na dia natao ho an'ny akany manokana aza ity fitaovana vaovao ity, ireo tovolahy avy ao Redmond dia nanao izay farany vitany mba hamoronana AIO ahafahantsika mamorona antontan-taratasy tsotra hamoronana sary mahavariana noho ny Surface Pen sy ny Surface Dial. Araka ny hitantsika amin'ny horonantsary, Ny fametrahana ny Surface Dial eo amin'ny efijery dia mampiseho palette miloko ho azy ka mifantina ny loko ilaintsika, na manova ny borosy hanoratantsika.
Na eo aza ny fampidirana écran 28-inch, dia manify be ny iray manontolo, hatrizay 12,5 milimetatra fotsiny ny hateviny. Ity fitaovana hamehezana ny monitor ity dia manome antsika fahaiza-manao izay tsy hitantsika amin'izao fotoana izao amin'ny fitaovana hafa eny an-tsena, satria arakaraka ny filantsika dia azontsika atao mihitsy aza ny mametraka ny efijery mitsivalana tanteraka na somary mitsangana.
Surface Studio famaritana
Efijery touchscreen 28-inch miaraka amina vahaolana 3.840 x 2.160 teboka miaraka amin'ny taha 3: 2
Intel Core i5 / i7 Kaby Lake processeur
NVIDIA GeoForce GTX 980M Sary natokana
Fahatsiarovana RAM: Manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 32 GB DDR4
4 seranan-tsambo 3.0
Vidiny: Manomboka amin'ny $ 2.999.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny AIO vaovao an'ny Microsoft dia antsoina hoe Surface Studio ary mahavariana
Aldren dia hoy izy:
Tsy mampino! Talohan'ny nanofisako imac…. fa tiako io !!!!
Mamaly an'i Aldren
Ny Surface Book i7 dia taranaka faharoa amin'ny Surface Book
Huawei dia tsy mpanamboatra intsony izay mivarotra fitaovana betsaka indrindra ao Shina